Ukusetyenziswa 'Kwelo' kwiilwimi zesiNgesi
Igama elithi 'elo' ligama eliqhelekileyo ngesiNgesi elisetyenziswe ngezindlela ezahlukeneyo. Ngaba uqaphele ukusebenzisa 'oko' kwisivakalisi sangaphambilini? Kule meko, 'oko' kwakusetyenziswe njengesigama esichaphazelekayo njengesincoma. Ngokuqhelekileyo 'oko' kunokusetyenziswa okanye ukushiya ngaphandle kwesivakalisi ngokupheleleyo. Ngokomzekelo, abafundi abaninzi baseNgesi bayazi (oko) unokushiya 'ukuba', kuxhomekeke kwimeko. Esi sikhokelo ekusebenziseni 'oko' kuya kukunceda ukuba uqonde ixesha lokusebenzisa igama, kunye nokuba kulungile ukushiya.
'Oko kusetshenziswe njengomnqweno ekuqaleni kweemvakalisi ukubonisa into enye ekude kwisithethi. Qaphela ukuba ubuninzi bokuba 'loo' njengesigqibo sokuthi 'abo'. 'Oko' kunye 'nalawo' ngokuqhelekileyo asetyenziswa kunye 'khona' ukubonisa ukuba into (ayi) ayisondele kwisithethi.
Lo ngumhlobo wam uTom ngaphesheya.
Le ipensela enayo esandleni sakho.
Lezo zemizobo yiCezanne.
Le yindlu yam kwikona yesitalato.
'Loko' njengegama elibizayo
'Oko kungasetyenziselwa njengesigama esichaphazelekayo ukudibanisa amabini amabini. Kule meko, 'loo nto' inokuthi ithatyathwe endaweni 'ngubani' okanye 'yiyiphi'.
Imizekelo: Oko = Yiyiphi
UTom wathenga iiapulo ebezithengisa yona.
UTom wathenga ii-apula ezithengiswa yindoda.
Imizekelo: Le = Ngubani
UPetros wamema le nkwenkwe leyo entsha kwiklasi.
UPetros wamema le nkwenkwe eyayiyitsha kwiklasi.
'Kulo Mhlathi njengento
'Oko kungasetyenziswe kwiziqendu ezisebenza njengento yesenzi .
UJennifer wathintela ukuba uya kukhawuleza eklasini.
UDoug wayesazi ukuba wayefuna ukukhawuleza.
Utitshala usicebisa ukuba sigqibe umsebenzi wesikolo.
'Oko' kwiSigatshana njengeNkomazo kwiNoun okanye i-Adjective
'Oko' kunokusetyenziswa kwisigatshana esilandela isibizo okanye isichazi njengesincoma. Ukuncoma kunceda ukunika ulwazi olongezelelweyo malunga nesibizo okanye isichazi.
Iphendula umbuzo othi 'kutheni'.
UPetros ucaphukile kukuba udade wakhe ufuna ukuphuma esikolweni esiphakeme.
UMnu. Johnson uyayixabisa imizamo yethu eye yangenisa iminikelo eninzi.
Uyaqiniseka ukuba unyana wakhe uya kwamkelwa kwiHarvard.
'Leyo' Igatya njengesihloko sesigwebo
'Amagatya angakwazi ukuvelisa ibinzana elisebenza njengesihloko sesigwebo. Ukusetyenziswa kwale 'gama' ngamagatya asemthethweni kwaye akaqhelekanga kwintetho yansuku zonke.
Ukuba nzima kunzima ukuyiqonda.
Ukuba uMariya uvakalelwa gqitha buhlungu kakhulu.
Ukuba utitshala wethu ulindele ukuba senze iiyure ezimbini zomsebenzi wesikolo yonke imihla iphosa!
Inyaniso yokuba ...
Ngokuphathelele ekusebenziseni 'amacandelo' njengesihloko ibinzana eliqhelekileyo elithi 'Inyaniso yokuba ...' ukuzisa isivakalisi. Nangona zombini iifom zichanekile, kuninzi ngokuqhelekileyo ukuqala isivakalisi ngegama elithi 'Inyaniso yokuba ...'
Inyaniso yokuba ufuna ukukubona kufuneka kukuvuyise.
Inyaniso yokuba ukungabikho kwemisebenzi kusekuphakamileyo kukubonisa ukuba uqoqosho olunzima luni.
Inyaniso yokuba uTom uphumelele uvavanyo lubonisa ukuba uphumelele kangakanani.
Izihlanganisi eziManyeneyo kunye 'nelo'
Kukho iinombolo ezihlanganisiweyo (amagama adibanisa) kunye 'nelo'. Ezi binzana zivame ukusetyenziswa kwisiNgesi esisemthethweni kwaye zibandakanya:
ukwenzela ukuba ukubonelela ukuba xa kunikezelwe ngoku
Wathenga ikhompyutha ukuze aphucule ukuthayipha kwakhe.
USusan wamxelela ukuba uza kumtshata aze anike umsebenzi.
U-Alice uyonwabile ngoku ngoku uye wangena kwikhaya elitsha.
Emva kokuVeza iiVenzi
'Oko kungasuswa emva kokunika izenzi njengokuba uthi (oko), xelela umntu (oko), ukuzisola (oko), kuchaza (oko), njl.
U-Jennifer uthe (oko) wayekhawuleza.
UJack wandixelela (oko) wayefuna ukufudukela eNew York.
Umphathi ubonise (oko) inkampani yayenza kakuhle kakhulu.
Ezinye izichazi zingalandelwa ngulo 'xa' xa uphendula umbuzo othi 'kutheni'. 'Oko kungasuswa emva kwesichazi.
Ndiyonwabile (oko) ufumene umsebenzi omtsha.
Ubuhlungu (oko) uya kuNew York.
UJack uxhala (oko) akazange aphumelele uvavanyo.
Njengento kwiCandelo eliHlangeneyo
Kuqhelekile ukulahla 'loo nto' xa kuyinto yesigatya esivumelanayo esilungisayo.
Wamema le nkwenkwe (leyo) wadibana nololiwe.
U-Shelly wathenga isihlalo (eso) ebesibonile kwintengiso.
UAlfred ufuna ukufunda incwadi (leyo) uJane ucebisa.
I-Word Order kwiSpanish Sentences
I-Spanish isebenzisa njani umbuzo ongapheliyo kunye neeMarko ezithandekayo?
Indlela yokwenza iSpanish Accents neMpawu kwi-Ubuntu Linux
Inyaniso emva kweNqaku elithi 'Ukuziphatha kakubi yiyona ndlela ephezulu kunazo zonke zokuthandwa kobuzwe'
UJoan Wester Anderson kwiintlanganiso zeengelosi
Uninzi lweMpawu zoMculo Ukufa kwama-80s
Biography ka-Odile Decq
I-Ante Pavelic, i-Croatian War Criminal
I-Admission State University